Iveki yeSayensi - i-Geofumadas
Agasti, 2011 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Kuye kwaba liveki elonwabisayo kubantwana, kunye nokuvavanya kwabo kwiSayensi zeNdalo zeNzululwazi.
Nangona bekungekho ixesha elide lokuhlaziya nokucwangcisa, umsebenzi weBeba ubonise isiphaluka segesi usebenzisa i-lighthouse spell lighthouse. Nangona elula, into ebaluleke kukuba uyenayo kukuba ingxelo kunye nemiboniso yaqulunqwa ngokupheleleyo ngesiNgesi, kuba ibhalwe ngeelwimi ezimbini ukusuka kwi-Kinder (le nkwenkwana ayizange ifinyelele olo lonwabo).
Kwakhona izihlomelo zeleta yakhe zazingumntu wokuqala ngaphandle kwesihloko esiphezulu. Nangona kwakungeyona nto imnandi kakhulu ukuba ayifanelekanga kwisigaba esilandelayo. Ngolunye ulandelayo kuya kufuneka sicwangcise into encinci elula, ekhulisa amandla ayo okwemvelo. Kucacile ukuba intsimi yakhe ayilona uphando olucokisekileyo, kodwa i-oratory, i-mathematics nobugcisa; intlangano engaqhelekanga ekhangeleka njengezakhiwo kunye nolawulo lwamaNazi.
Nangona umsebenzi womfana ungenye inqanaba. Kule ngongoma kuhlaziywa kwe-Stand since ithola indawo yokuqala kwindawo yamacandelo amahlanu e-Course First, ngoko ke ingcinezelo yayo kukukhuphisana nesikolo sonke. Isishukumisayo esihle sicinga ukuba isiphakamiso sakhe sokuqala sokuphanga kwerobhothi asizange kubonakale kunomdla kumfundisi.
Ubekho kule minyaka engaphezulu kwenyanga, kunye namanxulumane amabini endikufanele ndiwuthwale kwaye ndiwazise ekubeni aqale isitofu esinjalo semetroane. Kwakuyinto enyanyekayo, kuba babhalwa kwividiyo ngethuba xa baqokelela inkunkuma, phakathi kwabo inkunkuma yenja; umonakalo omkhulu owenene nomama ngenxa yokuba sele uchithe isitya se saladi esibonakalayo sokubakhupha kwiintlawulo zabo.
Yayilingana xa iintsuku 15 emva ekugqibeleni unayo eziplagwe methane ilunyekwa ekupheleni lo mbhobho, kwafuneka ukuba ulahle nje oyile yokupheka ezinye esitovini ngayo enchants ukuba prendiera wome.
Kuba kuyo sele okwesibini kokuphumelela oku, xa kwibakala lesine senza indlu epheleleyo kunye iibhalbhu kunye panel switsha ukubonisa indlela sisindiswe umda ngokoqoqosho ukusetyenziswa kwezibane omnye, ababini, okanye ngaphezulu. Eli xesha ke waphumelela indawo yokuqala kwinqanaba yesikolo sonke, yaba umsebenzi omkhulu ethwele phakathi ezimbini, indlu wayenze enebhokisi Kodak Printer kunye ayifulele ibhokisi pizza mpelaveki, ke thina sibe nge tempera kwaye sashiya ikhefu ecaleni apho sibona khona iiplanga ezimbini zihlotshiswe ngokupheleleyo kwiimidlalo ezikhoyo.
Lo ngumnye umculi, nangona umzobo ogqithiseleyo kunye nezobugcisa.
Ezi izenzo emihle, ukuba bakhumbuze kum imihla yam kwikholeji xa enza umvavanyi transistor, isixhobo ukuba namhlanje phantse akukho ukusetyenziswa kodwa ngaloo mihla oko lithathe nayiphi Igcisa yokulungisa yerediyo. umsebenzi omkhulu, nangona ukuphuma nemeko ngenxa yokuba umdla kangako iindwendwe jikelele kumgangatho osezantsi of Congress, nayo edinayo kwaye kunzima ukucacisa abakwa kunye nootitshala ukuba oko kwakuthetha ezichaseneyo NPN njengoko gizmo uvumelekile ukuba wokwephuka test kunye nokuqhubeka, esasiyazi ukuba i-electronics technician eyanikezelwa kwimveliso yayiba nomdla kulo mdlalo.
Ewe, ixabiso leentsuku, i-Griselda, intombazana evela kwiisigidi ezimfutshane zentliziyo yayisempilweni kwaye isithumila kuthi ngexesha elide nangona sasingazi ukuba ngubani na owamathathu abathathu abaye bazinikezela. U-El Chele, u-Obesso noHulk (mna), ngenxa yokuba ndibenayo le nickname iminyaka emibini; Owesibini wazinikezelwa kwesi sihloko, ngoku uyingcali kwi-electronics kwaye unomsebenzi ogcweleyo wamasifundisane, okwesibini iphelile ukuba ngummeli kwaye ndi ... imbongi yezobuchwepheshe.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iikhompyutri zekhosi ye-Topography
Post Next GeoConnectPeople, intanethi yenethiwekhi yesimo se geomaticOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 kwi "Iveki yeSayensi"
Ndikhumbula ukuba esikolweni, senze ukuba sithi, "isikhululo sikanomathotholo": sidale inkqubo kwi-6.0 ebonakalayo esisiseko, sibonisa isidlali somculo, sitshintshile nesandula kusetyenziswa umbhobho ngaphandle kwamacingo, endaweni yokufumana, sithunyelwe frequency ethile Le microphone eqhagamshelwe kwikhompyuter kunye nomdlali kwisibonisi esisisiseko, ukongeza ekufumaneni isantya esifanelekileyo kumdlali werediyo (bekufanele ukuba ibe yiradiyo yedijithali, kuba imayile yombhobho yayiyeyona, ayimnandanga njengoko isenzeka kwirediyo eqhelekileyo, i-100.4, endaweni ye-100.5) Kwaye ngale nto sidlale umculo esawufuna, kwavela into emnandi kakhulu….
Ewe, umsebenzi omkhulu.
Jose L. uthi:
Imizobo kwi-metethane igesi isitofu kakhulu.